Kuenderera mberi chinhu kubva kuApple chinokutendera kuti uchinje nyore pakati (kana kushandisa pamwe) yako iPhone, iPad, Mac, iPod Touch uye Apple Watch.
Inosanganisira akati wandei maficha, ayo anosanganisira iPhone Cellular Calls, Handoff, Universal Clipboard, SMS/MMS Messaging, Instant Hotspot, Continuity Camera, Continuity Sketch, Continuity Markup uye Auto Unlock.
Ichi chimiro chinotsanangura chimwe nechimwe cheizvi Kuenderera mberi maficha uye maitiro ekugonesa nekudzima Kuenderera mberi.
iPhone inomhanya iOS 8.1 kana gare gare uye yakagadziriswa network chirongwa
iOS 8 kana gare gare
macOS X Yosemite kana gare gare
Iyo iPhone Cellular Calls ficha inobvumidza iwe kuti ugadzire uye ugamuchire nharembozha kubva iPad yako, iPod touch, kana Mac - usingabudise iPhone yako muhomwe yako - kana iri pane imwecheteyo network ne iPhone yako.
Inoda iPhone inomhanya iOS 8.1 kana gare gare uye yakabatidzwa network chirongwa uye ichashanda nechero iPad kana iPod Touch inomhanya iOS 8 kana gare gare uye chero Mac inomhanya macOS X Yosemite kana gare gare.
Kufona paMac yako: Fambisa chitubu pane chero nhamba yefoni muMazita, Kendari, Safari kana imwe app inoona yakadai data> Dzvanya museve mubhokisi rinoratidza nhamba yefoni> Sarudza Kufona [nhamba yefoni] Uchishandisa iPhone. Iwe unogona zvakare kuvhura iyo FaceTime app uye isa nhamba yefoni mundima yekutsvaga uye kufona uchishandisa iyo yekuteerera sarudzo.
Kufona paPad/iPod Touch yako: Tinya nhamba yefoni muMazita, Karenda, Safari kana imwe app inongoona yakadaro data. Iwe unogona zvakare kuvhura iyo FaceTime app> Tinya iyo “+”> Isa nhamba yefoni mundima yekutsvaga> Tinya chiratidzo chefoni kuti unzwe.
Unogona kupindura mafoni ne swipe pane yako iPad kana iPod Touch. PaMac, iwe unowana chiziviso chaunogona kupindura, kutumira anofona meseji kana kutumira kuvoicemail. Ramba uchifunga chero mudziyo unogovera yako Apple ID uchawana yako iPhone mafoni.
Maitiro ekugonesa kana kudzima foni kufona paKuenderera mberi
Kugonesa iyo yekufona runhare paKuenderera mberi, saina muICloud uye FaceTime uine imwechete Apple ID pamidziyo yako yese. Ita shuwa kuti mudziyo wega wega une Wi-Fi yakabatidzwa uye mudziyo wega wega wakabatana kune imwecheteyo network.
Pa iPhone yako: Enda kuSettings> Foni> Kufona pane Zvimwe Zvishandiso> Batidza/dzima Bvumira Mafoni pane Mamwe Madhivhisi> Toggle/untoggle zvishandiso zvaunoda kubvumidza mafoni.
Pane yako iPad kana iPod touch: Enda kune Zvirongwa> FaceTime> Batidza/dzima Mafoni kubva ku iPhone.
PaMac yako: Vhura iyo FaceTime app> Sarudza FaceTime> Zvaunoda> Dzvanya Settings> Sarudza/design Calls Kubva iPhone.
OS X Yosemite kana gare gare
watchOS 1.0 kana gare gare
Handoff inokugonesa kumira kutanga kushanda pamudziyo mumwe wobva wachinja kune imwe mudziyo uri pedyo kuti utore pawakasiira. Inogona kushandiswa nechero Mac, iPhone, iPad, iPod Touch uye Apple Watch inoshanda paIOS 8, OS X Yosemite kana watchOS 1.0 kana gare gare.
Pfungwa ndeyokuti iwe unogona kubva kure neMac yako uye kuenderera pane nharembozha, kana zvinopesana. Kuti ushandise Handoff, vhura app kuti utange basa, sekutanga email kana kuvhura webhusaiti paSafari. Kuti uenderere mberi nebasa iro paMac, iwe unozofanirwa kudzvanya iyo app icon kuruboshwe rweDock. Kuti uenderere mberi pa iPhone, iPad kana iPod, vhura iyo App switchcher uye tinya iyo app banner pazasi pechidzitiro.
Iwe unozofanirwa kusainwa muICloud neiyo Apple ID pamudziyo wega wega waunoda kushandisa Handoff nawo. Chishandiso chega chega chinodawo kuve neBluetooth yakabatidzwa, Wi-Fi yakabatidzwa uye Handoff yakabatidzwa. Rangarira kuve nechokwadi chekuti zvishandiso zvako zvakabatana kune imwecheteyo Wi-Fi network uye zviri padhuze.
Handoff inoshanda nemamwe echitatu-bato mapurogiramu, pamwe neApple maapps akadai seMail, Safari, Mepu, Mharidzo, Zviyeuchidzo, Karenda, Mazita, Mapeji, Nhamba, uye Keynote.
Maitiro ekubatidza kana kudzima Handoff
PaMac: Sarudza Apple menyu> Zvaunoda System> Zvakawanda> Sarudza kana kusasarudza “Bvumira Handoff pakati Mac iyi uye iCloud mudziyo wako”.
Pa iPhone yako, iPad kana iPod Touch: Enda kune Zvirongwa> Zvakawanda> AirPlay & Handoff> Batidza/dzima Handoff.
PaApple Watch yako: PaApple Watch app pane yako iPhone> Tinya Zvakawanda> Batidza/dzima Gonesa Handoff.
iOS 10 kana gare gare
MacOS Sierra kana gare gare
Yese Clipboard inokutendera iwe kukopa chimwe chinhu pane imwe Apple mudziyo, senge zvinyorwa, mifananidzo, mafoto uye mavhidhiyo, uye unamira pane imwe Apple mudziyo.
Inoshanda nechero Mac, iPhone, iPad kana iPod touch inomhanya macOS Sierra kana iOS 10 kana gare gare. Macs anomhanyisa macOS High Sierra kana gare gare achakwanisawo kukopa nekuisa mafaera ese uchishandisa Universal Clipboard.
Iyi ficha inodzima nekudzima yega kana iwe uchigonesa kana kudzima Handoff.
iPhone uchishandisa iOS 8.1 kana gare gare ine activated network plan
Iyo Mameseji Ekutumira Mameseji chimiro cheKuenderera mberi inoita kuti iwe uone maSMS neMMS mameseji anotumirwa uye anogamuchirwa ne iPhone yako pane yako. Mac, iPad uye iPod Touch. Inoda iPhone inomhanya iOS 8.1 kana gare gare uye yakabatidzwa network chirongwa uye ichashanda nechero iPad kana iPod Touch inomhanya iOS 8 kana gare gare uye chero Mac inomhanya macOS X Yosemite kana gare gare.
Kunyangwe kana iye anogamuchira aine iPhone, unogona kuenderera mberi nehurukuro yemeseji kubva kune chero mudziyo waunoda. Iwe unogona zvakare kutanga zvinyorwa nekudzvanya nhamba muSafari, Contacts, kana Karenda.
Mabatidza kana kudzima kutumira meseji paKuenderera mberi
Iwe unofanirwa kutanga waona kuti wasaina muICloud neiyo Apple ID pamidziyo yese.
Ita shuwa kuti zvishandiso zvese zvakabatana neWi-Fi kana nharembozha.
Pane yako iPhone, iPad, iPod Touch: Enda kune Zvirongwa> Mharidzo> Tumira & Gamuchira> Sarudza/sasarudza zvese zvaunoda kutumira uye gamuchira mameseji kuenda nekubva.
PaMac yako: Vhura maMessages> Sarudza Mharidzo> Zvaunofarira> Dzvanya iMessage> Sarudza/sarudza zvese zvaunoda kutumira uye kugamuchira mameseji kuenda nekubva.
Pa iPhone yako: Enda kune Zvirongwa> Mharidzo> Mameseji Mharidzo Forwarding.
Simbisa zvese nekuisa kodhi (inoratidza pane yako iPad, iPod Touch, kana Mac) mu iPhone yako.
iPhone kana iPad uchishandisa iOS 8.1 kana gare gare ine activated network plan uye Personal Hotspot
Wave nenguva yakareba uchikwanisa kushandisa yako iPhone kana iPad seMunhu Hotspot, nokudaro zvichiita kuti iwe uwane iyo Internet pane mamwe maturusi kana chiratidzo cheWi-Fi chisipo, asi maitiro ekuseta anowedzera kurongeka neInstant Hotspot, inokubvumira kuti ubatanidze ipapo pasina kuisa password.
Unogona kushandisa Instant Hotspot ficha pane chero Mac, iPhone, iPad kana iPod touch iri kuita macOS X Yosemite kana gare gare, iOS 8 kana gare gare. Iwe zvakare unozoda iPhone kana iPad inomhanya iOS 8.1 kana gare gare uye yakamisikidzwa network network provider chirongwa chinopa Personal Hotspot sevhisi.
Kuti ubatanidze kune Yako Hotspot Yako, tevera mirairo iri pasi apa. Iwo maviri masisitimu anongotanga kutaura kune mumwe nemumwe, uye nekuti kune yakananga kubatana, unogona kuona ipapo ipapo chiratidzo chekubatanidza pamwe nehupenyu hwebhatiri hwe iPhone yako.
PaMac yako: Tinya pane iyo Wi-Fi mamiriro menyu mubhari yemenyu kuti usarudze zita reiyo iPhone kana iPad inopa Yako Hotspot.
Pane yako iPad, iPhone, iPod Touch: Enda kune Zvirongwa> Wi-Fi> Tinya zita reiyo iPhone kana iPad inopa Yako Hotspot.
Maitiro ekugonesa Instant Hotspot pane Kuenderera mberi
Kuti ugone kugonesa Instant Hotspot yako iPad, iPod Touch, Mac kana imwe iPhone, iwe unozofanirwa kutanga uine shuwa kuti iPad yako kana iPhone ine yakabatidzwa yekutakura chirongwa chinopa Personal Hotspot sevhisi.
Mushure meizvi, ita shuwa kuti mudziyo wega wega wakasainwa muICloud uchishandisa imwechete Apple ID, mudziyo une Bluetooth yakabatidzwa uye mudziyo wega wega une Wi-Fi yakabatidzwa.
Kudzima Instant Hotspot: Enda kune Zvirongwa pa iPhone yako> Personal Hotspot> Bvisa iyo Bvumira Vamwe Kujoinha.
Kuenderera mberi Kamera
iOS 12 kana gare gare
MacOS Mojave kana gare gare
Kuenderera mberi Kamera inobvumidza iwe kushandisa yako iPhone, iPad kana iPod Bata kutarisa gwaro kana kutora pikicha yechimwe chinhu uye kuti ibude ipapo ipapo paMac yako. Inoda iPhone, iPad kana iPod Touch inomhanya iOS 12 kana gare gare, uye Mac inomhanya macOS Mojave kana gare gare.
Iyo Kuenderera mberi Kamera ficha inoshanda nehuwandu hwemaapplication anosanganisira Finder, Email, Messages, Notes, Numbers, Mapeji, TextEdit uye Keynote.
Maitiro ekushandisa iyo Kuenderera mberi Kamera kutora mufananidzo
Kutora foto ne iPhone yako kana iPad uye kuti ioneke paMac yako:
Vhura iyo inotsigirwa application
Kudzora-tinya mugwaro kana hwindo kwaunoda kuti foto ioneke, kana sarudza iyo Faira kana Isa menyu
Sarudza Kupinza kana Isa kubva ku iPhone kana iPad> Tora Mufananidzo, iyo inovhura iyo kamera app pane yako iPhone kana iPad
Tinya bhatani rekuvhara kuti utore mufananidzo pa iPhone yako kana iPad
Tinya Shandisa Mufananidzo kana Torazve.
Mufananidzo wako uchaonekwa mugwaro kana hwindo paMac yako.
Kushandisa Kuenderera mberi Kamera ine Finder paMac: Vhura iyo Finder hwindo uye tinya zvigadziriso cog pop-up menyu kana Kudzora-tinya paDesktop kana hwindo paunoda kuti mufananidzo wako uoneke> Sarudza Kupinza kubva ku iPhone kana iPad> Tora Mufananidzo.
Maitiro ekushandisa iyo Kuenderera mberi Kamera kuongorora gwaro
Kuti utarise gwaro ne iPhone yako kana iPad uye uite kuti rioneke paMac yako:
Vhura purogiramu inotsigirwa
Dzora-tinya mugwaro kana hwindo paunoda kuti scan yako ioneke
Sarudza iyo Faira kana Insert menyu
Sarudza Kupinza kana Isa kubva ku iPhone kana iPad> Scan Zvinyorwa, izvo zvinovhura iyo kamera app pa iPhone kana iPad yako
Isa gwaro rako uchitarisa kamera pane yako iPhone kana iPad, wozomirira kuti scan ipedze.
Kana iwe uchida kutora scan nemaoko, baya bhatani rekuvhara kana rimwe remabhatani eBhuku, dhonza makona kuti ugadzirise scan kuti ikwane peji.
Tinya Chengeta Scan
Wedzera mamwe ma scan kugwaro kana kudzvanya Sevha kana wapedza
Ma scans ako anoonekwa mugwaro rePDF mugwaro kana hwindo paMac yako
Kuenderera mberi Sketch uye Kuenderera Makapu
iOS 13 kana gare gare
macOS Catalina kana gare gare
Kuenderera mberi Sketch uye Kuenderera Makapu inobvumidza iwe kushandisa yako iPhone, iPad kana iPod Bata kuisa zvikeche muMac zvinyorwa zvako, kana rarama markup maPDF nemifananidzo paMac yako.
Iwo maviri maficha anoda uye iPhone kana iPod Touch inomhanya iOS 13 uye gare gare, iyo iPad inomhanya iPadOS uye Mac inomhanya macOS Catalina kana gare gare. Ivo vanozoshanda kana midziyo yako miviri iri padhuze, Wi-Fi neBluetooth yakabatidzwa uye Mac neiPad, iPhone, kana iPod Touch yakasainwa kuICloud neiyo Apple ID uchishandisa maviri-chinhu chechokwadi.
Kuenderera mberi Sketch uye Kuenderera mberi Markup inoshanda nemamwe echitatu bato maapuro, pamwe neApple maapuro anosanganisira Mapeji, Nhamba, Keynote, Email, Messages, Notes, uye TextEdit.
Maitiro ekushandisa Continuity Sketch
Kuenderera mberi Sketch kunoita kuti ukumbire sketch nyowani kubva kuPad, iPhone, kana iPod touch paMac yako wobva waisa sketch mugwaro rako reMac.
Iwe unozofanirwa kutanga wavhura gwaro paMac yako. Zvichienderana nekuti ndeipi app yauri kushandisa, sarudza Faili kubva mubhara remenu, kana Isa > Isa kubva [mudziyo] > Wedzera Sketch. Iwe unogona zvakare Kudzora-tinya mukati megwaro rako, wobva wasarudza Wedzera Sketch kubva pane mapfupi menyu.
Iwindo re sketch rinobva ravhurika pa iPhone, iPad kana iPod Touch yako richikutendera kuti ugadzire sketch uchishandisa chigunwe chako kana Apple Penzura. Mushure mekusarudza Zvaitwa kana wapedza sketch yako, sketch ichaonekwa mugwaro rako reMac.
Maitiro ekushandisa Continuity Markup
Continutity Markup inokutendera iwe kushandisa Mac yako kukumbira gwaro markup kubva kune yako iPad, iPhone, kana iPod touch. Sezvo iwe uchiwedzera markup pane chako kifaa, zvichaitika live paMac yako - yakakwana kune zvinhu zvakaita sekusaina magwaro semuenzaniso. Heino maitiro:
Tsvaga iyo PDF kana gwaro raunoda kuisa markup
Sarudza gwaro uye wodzvanya spacebar kuti uvhure mune yekutarisa uye tinya peni markup icon kumusoro, kana
Kudzora-tinya gwaro, wobva wasarudza Kurumidza Zviito> Markup kubva pane mapfupi menyu
Kubva pabhatani rekushandisa riri pamusoro pehwindo rekuona, tinya bhatani rekuti annotate (rectangle nepeni)
Iwindo remakapu rinobva ravhurika pane yako iPhone, iPad kana iPod Touch
Shandisa chigunwe chako kana Apple Penzura kugadzira mamakisi ako
Tinya "+" yezvishandiso zvekuwedzera mavara, siginicha, magnifier, kana maumbirwo nemiseve.
Shanduko dzichaonekwa dzichirarama paMac yako
Dzvanya zvaitwa kana wapedza
Kuti uchengetedze shanduko, tinya zvakaitwa paMac yako futi
macOS High Sierra uye watchOS 3 kana gare gare yeKuvhura
macOS Catalina uye WatchOS 6 kana gare gare yekubvumidza chimiro
Imwe yeEkuenderera mberi maficha ndeye Auto Unlock. Iyo inokutendera iwe kuti uvhure otomatiki Mac yako paunenge wakapfeka yako Apple Watch. Iwe unogona zvakare kushandisa yako Apple Watch kubvumidza zvimwe zvikumbiro zvingangoda password yako yemutungamiriri.
Iwe unofanirwa kunge uri padyo neMac yako kuti ishande uye unofanirwa kunge wakapfeka yako isina kukiiwa Apple Watch. Zvese zvaunoda kuti uite kumutsa Mac yako uye ichakuisa iwe otomatiki. Ramba uchifunga kuti iwe uchafanirwa kuisa password yako kekutanga paunopinda kuMac yako mushure mekubuda, kutangazve kana kudzima Mac yako.
Iwe unozoda Mac inomhanya macOS High Sierra kana gare gare uye Apple Watch inomhanya watchOS 3 kana gare gare yeAuto Unlock. Kana iwe uchida kushandisa yako Apple Watch yekubvumidza zvikumbiro zvingada password yako, iwe unozoda Mac inomhanya macOS Catalina kana gare gare uye Apple Watch inomhanya watchOS 6 kana gare gare.
Maitiro ekugonesa kana kudzima Auto Unlock
Kuti umise iyo Auto Unlock ficha, iwe unofanirwa kutanga waona kuti Mac yako neApple Watch zvakasainwa muICloud neApple ID imwechete, kuti Apple ID yako iri kushandisa maviri-zvinhu kusimbiswa, kuti Mac yako ine ese Wi-Fi. uye Bluetooth yakavhurwa uye kuti Apple Watch yako ine passcode.
Iwe unozofanirwa kunanga kuApple menyu pane yako Mac> System Zvaunofarira> Chengetedzo & Yakavanzika> Tiki kana Kusaruta “Shandisa yako Apple Watch kuvhura maapplication uye Mac yako” kana “Rega Apple yako Watch kuvhura Mac yako.”
Kuti utarise kana Mac yako inotsigirwa: Dzvanya uye ubate kiyi yesarudzo uchisarudza iyo Apple menyu> Sarudza Ruzivo rweSistimu> Tinya paWi-Fi mubhara rekuruboshwe> Tsvaga "Otomatiki Kiinura: Inotsigirwa" kurudyi.